'Zemikhosi' ngesikhathi sokukhulelwa
ezisetshenziswa kakhulu ekwelapheni izifo wokugaya ukudla bese dysfunctions wathola izidakamizwa ngokuthi "zemikhosi" Empeleni yezokwelapha zesimanje. Ngenxa Ukwakheka yayo pancreatin, alwa ngayo ezifana izenzakalo ezingemnandi njengoba isilungulela, ukusinda, ukuvuvukala, ukuqumba, isicanucanu futhi.
Lezi izimpawu zivame ukuba kwenzeke kubantu besifazane abakhulelwe aqala "udle amabili" futhi, ngenxa yalokho, ukunikeza umthwalo double kakade ukusebenza kwimodi eziphuthumayo, umzimba, okuyinto evame iphutha. Okufanele ukwenze ezimweni ezinjalo, ngoba cishe yonke imithi avumele ukuba sibhekane ngokuphumelelayo izimpawu ngenhla contraindicated kubantu besifazane abakhulelwe. Nokho, kunokuningi okungakhulunywanga ngakho. Lezi zihlanganisa ngempumelelo nangokuzethemba izidakamizwa ezivamile "zemikhosi".
Kungenzeka yini ukuba umuntu "zemikhosi" kwabesifazane abakhulelwe ukuthatha ngendlela efanayo njengoba ezinye iziguli?
Kwabesifazane abakhulelwe baba baningana amalungiselelo akhethekile. Nokho, ngakho kwenzeka ukuthi kuba "zemikhosi" kungcono kunokusebenzisa enye izidakamizwa. Odokotela bavame ukunquma "zemikhosi" ngesikhathi sokukhulelwa njengendlela kugayeke futhi sinjalo inqubo yokwenza enzyme. Ukulungiswa, ngaphezu sezinkomo Bile akhiphe, futhi zihlanganisa hemicellulase enzyme (Amylase, protease, lipase). Nokho, Kukholakala ukuthi lezi zingxenye akunangozi, odokotela batusa i "zemikhosi" ngokucophelela ngesikhathi sokukhulelwa, njengoba nje ngesikhathi ibele. Ezinganeni, "zemikhosi" kusetshenziswe ngokuqapha, kusukela ngineminyaka emithathu ubudala. Akunikeze imithi ku amaphilisi eyodwa kathathu ngosuku ngokuhlanganyela sokudla noma ngokushesha ngemva kokuba. Uma uthola akunakwenzeka ukwambula noma yokuchitha capsule, ngaphandle kwalokho bonke enzyme ewusizo bavezwa kubo esiswini nje ulahlekelwe nezici zabo. capsule Avikelayo, ngakolunye uhlangothi, ancibilikisa kuphela emathunjini azikhulule elikuqukethe ukuya endaweni oya kuyo ukuphepha ephelele.
Iziguli isifo sezinso, nenyongo sesinye noma amanyikwe ngokuqapha kufanele kuthathwe "zemikhosi". Izimo ethola izidakamizwa kufanele kucatshangelwe komzimba kanye high blood pressure, abantu kwathiwa unesifo "isifo sokusha kwesibindi kohlobo", labo abaye yokwehluleka kwesibindi, isibindi ikhoma, jaundice, kanye labo ziye zembula cholelithiasis, gallbladder empyema , noma ileus.
Ngaphambi kokuba ungibulale x-ray noma ultrasound, ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwesifundo kufanele baphuze 2 amaphilisi kathathu ngosuku. "Zemikhosi" ngesikhathi sokukhulelwa, lapho emizweni ezingemnandi esiswini zenzeka ngenxa bangadli kahle, nakho kungathatha izinsuku ezimbalwa. Lesikhatsi lesi esanele kujwayeleke ukusebenza esiswini. Endabeni izinhlungu zokugula okungathí sina, lapho kudingeka ukuba isiguli sibe replacement therapy njalo, "zemikhosi" kumele kuthathwe phakathi kwezinyanga ezimbili noma ezintathu, futhi ngezinye izikhathi iminyaka.
Uma uthatha le "zemikhosi" ngesikhathi sokukhulelwa, futhi ngokushesha nje uba nezimpawu ezifana sneezing, amehlo zamanzi, isicanucanu, wabonakala njalo indle okuxekethile, ubuhlungu besisu - mhlawumbe kungcono yokungezwani komzimba emuthini. Kulokhu, yokwamukela "zemikhosi" stop kangcono. Uma ingane uvele ukucasuka perianal, futhi ukucasuka emlonyeni, ngakho-ke umthamo enkulu izidakamizwa okwabelwe.
Ukuze isisu sakho kwaba enempilo, kufanele ukhumbule njalo ukuthi into esemqoka - zokuvimbela. Ukudla ngendlela efanele, ukugcina indlela yokuphila enempilo, futhi uma unezinkinga ukugaya bayishaya indiva. Futhi abesifazane abakhulelwe kudingeka uhlaziye imibono yabo mayelana ukudla, futhi akukho "amabili", kodwa ezimbili, benaka kwasekuqaleni, hhayi ubuningi kodwa izinga ukudla ongena umzimba wengane emzimbeni kamama.
Cishe nje izidakamizwa 'Colm': umhlahlandlela emfushane for iziguli
"Eplan" imithi. Yokusetshenziswa
"Dalatsin" - Gel ngoba induna. Uphenyo ijeli "Dalatsin"
"Melaxen": yokusetshenziswa, ukwakheka kanye uhlobo inkinga
Movalis Tablets nezinye izinhlobo Isikali zomuthi
Amazambane ezazigxishwe inyama nengulube
Isimo "Thumela ezweni elivela kulo" kusho ukuthini? Iposi laseRussia: ukulandelela kwezinto zokuposa
Yelaphani ngoba ubuhlungu bamalunga. yokugcoba eziphezulu amaphilisi ngenxa yobuhlungu emalungeni
Kukanjani obandayo ukungezwani ophahleni ophahleni?
Ama-namaname amantombazane ku-Web.
Sergey Sukhanov: Inhliziyo ku entendeni
Aleksandr Dyuma: Biography futhi umsebenzi umlobi odumile
Isimiso adversarial. Isimiso kokulingana zenqubo amaqembu
Umlobi nomhloli wamazwe Heinrich Harrer: Biography, umsebenzi, izincwadi ezingcono kakhulu, futhi ezithakazelisayo amaqiniso